MUQDISHO(P-TIMES)- Magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayey xaalada degmada Afgooye ee gobolka Shabellaha Hoose, halkaas oo fatahaad uu ka sameeyey Wabiga Shabelle.
Kulanka ayaa waxaa ka qayb galay qaar kamid ah gollaha wasiirada dowladd goboleedka Koonfur Galbeed oo loo xilsaarey xaalada gobolka Shabellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye, Hay’adaha deeq bixiyaasha iyo gudoomiyaha gobolka Shabellaha.
Shirka oo shir gadoominaayey wasiirka wasaarada Boostada Isgaarsiinta iyo Teknoolajiyada dowladd goboleedka Koonfur galbeed ayaa waxaa uga horeyntii warbixinta xaalada gobolkaasi gaar ahaan degmada Afgooye laga dhaqaystay gudoomiyaha gobolka Shabellaha Hoose.
Wasiiro ku xigeenada wasaaradaha gar gaarka maareynta iyo masiibooyinka Koonfur Galbeed wasiir ku xigeeenka wasaarada Tamarta iyo Khayraadka biyaha dowladd goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wasiirka wasaarada Kalluumeysiga iyo Khayraadka Badda dowladd goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay tilmaameen in ay muhiim tahay in loo gar gaaro bulshada ku dhibaataysan gobolka Shabellaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye.
Hay’adaha deeq bixiyaasha ka howlgala gobolka Shabellaha Hoose ayaa sheegey in ay ku dadaali doonaan sidii deeq ay u gaarsiin lahaayeen Afgooye si isku mid ahna ugu gurman doonaan gobolka Shabellaha Hoose.